ဝန်ထမ်းကောင်းတို့ရဲ့အမူအကျင့် (၅) မျိုး - YOYARLAY Digital Media and News
ဘယ်သူမဆို လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ တော်တဲ့သူတွေနဲ့ပဲ အလုပ်အတူတူလုပ်ချင်ကြပါတယ်။ ဒါဆို တော်တဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ? ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ်နေနေ အလုပ်ကို အချိန်မီပြီးတဲ့သူ၊ အမှားနည်းတဲ့သူ၊ အတွေ့အကြုံများတဲ့သူ၊ ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ မိမိလုပ်ရမယ့် အပိုင်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ… အဲဒီလိုထူးချွန်တဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
၁. ပရို (Professional) ဆန်ပါ
နေ့စဉ် ရုံးအဝတ်အစားကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမှုရှိပါ။ ရုံးချိန်ထက်စောအောင်လာပြီး မနက်စာနဲ့ မိမိ စားပွဲဝန်းကျင် သပ်ရပ်အောင်ပြင်ဆင်ပါ။ ရုံးချိန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ တစ်နေ့တာလုပ်ရမယ့်အလုပ်နဲ့ လူကြီးကို မေးမြန်းရမယ့်မေးခွန်းတွေကိုပြင်ဆင်ပါ။ ထမင်းစားချိန် ကော်ဖီဘရိတ်ကို ရုံးကသတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်အတွင်းပဲအသုံးချပါ။ ရုံးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေအတွက် ရုံးရဲ့ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်၊ ပရင်တာ အစရှိတာတွေကို အသုံးမပြုပါနဲ့။
တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခြင်းက ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ အမူအကျင့်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မပြီးနိုင်တော့ရင် အနည်းဆုံး ၁ နာရီစောပြီး သက်ဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့အထက်လူကြီးကို အကြောင်းကြားပါ။ ကိုယ်ပြီးနိုင်မယ့်အချိန်ကို အသိပေးပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း မပြီးတဲ့အလုပ်တွေအတွက် တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးပါနဲ့။
၃. လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ အမြဲတမ်းအဆင်ပြေအောင်နေပါ
ဝန်ထမ်းကောင်းတစေ်ယာက်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ်တစေ်ယာက်တည်း တော်နေတတ်နေရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးပါဘူး။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ အခက်အခဲတွေကိုလည်း ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စကားပြောဖို့အချိန်ရတိုင်း ကိုယ့်အခက်အခဲနဲ့ အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကို အမြဲမျှဝေပါ။ အလုပ်နဲ့ မဆိုင်တာတွေပြောပြီး အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့။ အကုန်လုံးရဲ့ အခက်အခဲ့တွေ ဖြေရှင်းနိုင်မှ ကုမ္ပဏီအောင်မြင်မှာကို စိတ်ထဲမှတ်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄. အလုပ်ပြီးမြောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက် စိတ်အားထက်သန်ပါ
ဝန်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းတစ်ခုက လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက် အမြဲစိတ်အားထက်သန်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို ပါးနပ်စွာနဲ့ တောင်းဆိုတတ်ရပါမယ်။
၅. အလုပ်ကို ပြီးစလွယ်မလုပ်ပါနဲ့
အားစိုက်နိုင်သမျှ အားစိုက်ပြီး ကိုယ်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ အလုပ်တစ်ခုပြီးတိုင်း ပြန်သုံးသပ်ပါ။ လိုအပ်ချက်တွေကို အချိန်ရသေးရင် ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်ပါ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်း မိမိရဲ့ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းကို အကုန်သုံးပါ။ အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်သွားပြီးတိုင်း နောက်လာမယ့်အလုပ်အတွက် အမြဲတမ်း အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါ။
Previous Previous post: သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းက ဧဝရက်တောင်အခြေစိုက်စခန်းကိုပိတ်ထား
Next Next post: အပတ်စဉ် ဗေဒင်ဟောစာတမ်းကဏ္ဍ (၁၇-၂-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)
လက်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အခါ ဘာလို့ ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ကြတာလဲ?
ခေတ်ပေါ် အစဉ်အလာအရ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံတဲ့ပုံစံက ဒီလိုမျိုးပါပဲ။ ချစ်သူကောင်လေးက ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ပြီး ချစ်သူကောင်မလေးကို ခရမ်းရင့်ရောင် လက်စွပ်ဗူးလေးထဲမှာ တလက်လက်တောက်ပနေတဲ့ စိန်လက်စွပ်ကိုပြပြီး လက်ထပ်ဖို့ခွင့်တောင်းတာပါ။ Post Views: 2,676
Published: December 22, 20179:53 am Updated: February 8, 20199:46 am